रोल्पामै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरेर नयाँ सन्देश दिन्छाँै । – रोल्पा समाचार
२०७६ आश्विन २६, आईतवार ०२:०३ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ आश्विन २६, आईतवार ०२:०३ गते
पछिल्लो समयमा रोल्पा जिल्लाका नयाँ पुस्ताहरु खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा सक्रिय बढ्दै गएको छ । जसल जिल्लामा विभिन्न खेलकुद क्षेत्रको विकास समेत टेवा पुगेको छ । “स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद” भन्ने मुल नारा सहित नेपाल मार्शल आर्टस हाप्किडो संघको सहयोगार्थमा र रोल्पा मार्शल आर्टस् हाप्किडो संघको आयोजनामा सहिद स्मृति मार्शल आर्टस हाप्किडो प्रथम राष्ट्रिय प्रतियोगिता–२०७६ परिवर्तन गाउँपालिका केन्द्र पुत्लाचौर रोल्पामा २०७६ साल कार्तिक महिनाको १ र २ गते आयोजना गरिएको छ । यतिबेला आयोजक प्रतियोगितको तीव्र तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको तयारी, प्रतियोगिता अयोजनाको उद्वेश्य, प्रतियोगिताको तयारी, खेलाडी सहभागिको अवस्था, आर्थिक सहयोगको अवस्था लगायतका विषयवस्तुमा कार्यक्रम संयोजक यमुना घर्तीमगरसँग रोल्प समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
हजुर, धन्यवाद सर ।
प्रतियोगिता सम्बन्धि बताइदिनुहोस्, न ?
विगतको विभिन्न कालखण्डहरु एक दशक सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनकारी अन्दोलनहरुमा सहिद बन्नुभएका महान सहिदहरुको स्मृतिसँगै खेला क्षेत्रको विकास, विस्तारबाट समुन्नत राष्ट्र निर्माण अभियान सकार पर्नका लागि यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । यस जिल्लामा यो प्रतियोगिता पहिलो पटक आयोजना हुँदै छ । यसमा सातै प्रदेश र एक आयोजक टिम गरी आठ ओटा टिम सहभागिता हुँदै छ । रोल्पा मार्शल आर्टस् हाप्किडो संघ आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
आम पाठक वर्गहरुले बुझ्ने गरी मार्शल आर्टस् हाप्किडो खेल सम्बन्धि जानकारी दिनुहोस्, न ?
विशेष गरी यो खेल आत्मा रक्षाका लागि खेलिने खेल हो । यो खेल कोरियाबाट स्थापना भई हाल विश्वका विभिन्न देशहरुमा यसको प्रशिक्षण भईरहेको छ । यसको जन्मदाता ऋजयष् थ्यलन( म्यय िहुन् । हाप्किडोको पूरा अर्थ ज्बउ भनेको ज्यचmबलन, प्ष् भन को एधभच र म्य भनेको एबतज इा ध्बथ भन्ने अर्थ बुझाउँछ । नेपालमा यसको संस्थापक अध्यक्ष युवा खेलाडी तथा समाज सेवी कालिबहादुर घर्तीमगर हुनुहुन्छ ।
सहिद स्मृति मार्शल आर्टस् हाप्किडो प्रथम राष्ट्रिय प्रतियोगिता–२०७६ तयारीकोे बोरमा बताइदिनुहोस्, न ?
यस प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यसका लागि यस जिल्लाका सबै स्थानीयतह लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय भईहरको छ ।
२राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता जिल्लामै आयोजना गर्नुको उद्वेश्य के हो ?
%विषेशतः रोल्पा जिल्लालाई यस खेलको माध्यमबाट सबै माझ चिनाउन यस जिल्लाम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउन र खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने । यसैगरी खेलकुदकै माध्यमबाट परिवर्तनको महायात्रामा सहिद हुनुभएका सम्पूर्ण सहिदहरुलाई सम्झिने उद्वेश्यका साथ यस प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
प्रयोगिताको निम्ति पुत्लाचौर नै कसरी उपयुक्त भयो ?
हुन त रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिपकाको पुत्लाचौर जस्ता ठाउँहरु भएका पनि होइन तर यस प्रतियोगिताको सम्पन्नको निम्ति रोल्पा मार्शल आर्टस् हाप्किडो संघ आयोजकको जिम्मेवारी ग्रहन गर्न तयार भएपछि केन्द्रीय समितिले यसलाई साथ दियो । सोही अनुसार आयोजकले रोल्पा जिल्लाको पुल्लाचौर ठाउँलाई छनौट गरेको हो । मैले यति भनि रहँदा नेपालका कुनै पनि कुनै ठूला प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न असर्मथन छन् भन्न खोजेको चाही होइन । प्रया सबै ठाउँमा यातायातको लगायतका सुविधा, मौसम अनुसारको वातारण अनुकुल, प्रयाप्त मैदान, आत्मिय संस्कार सबै नेपाली गाउँहरुमा सुविधा छ । यहाँ संसारका मानिसहरु रमाउन सक्छन् भने हामी नेपाली नेपाली किन रमाउन नसक्ने ? म विश्वस्त छु, यस जिल्लामा आयोजित प्रतियोगिता नेपालकै ऐतिहासिक र पृथक बन्ने छ ।
प्रतियोगितामा कुन–कुन स्तरका खेलाडीहरु सहभागिता हुँदै छ ?
यस प्रतियोगितामा यसभन्दा अगाडि विभिन्न प्रदेश स्तरीय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका प्रतिस्र्पधि गरी सकेका सिनियर तथा जुनियर खेलाडीहरुको सहभागिता हुनेछ ।
प्रतियोगितामा विजय खेलाडीहरुलाई कुन–कुन पुरस्कारबाट पुरस्कृति हुँदै छन् ?
यस प्रतियोगितामा विजय हुने खेलाडीहरुलाई मेडल, प्रमाण पत्र, आकर्षक ट्राफिहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतियोगिता सम्पन्नका लागि कति रमक खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ, साथै उक्त रकममध्ये कुन कुन सहयोगी निकायबाट कति रकम प्राप्त भएको छ ?
यस प्रतियोगिता सम्पन्न को लागि अनुमानित रकम रु २५ लाख ७० हजार खर्च हुने भएको छ । जसमा परिवर्तन गाउँपालिका कार्यालय रोल्पा प्रमुख प्रयोजन गरेको छ भने अन्य स्थानीयतहरुमा पनि आर्थिक प्रस्तावना पत्र बुझाएका छौं । के कति रकम दिने भन्ने विषयमा भने अझै टुङ्गो लागेको छैन । बाँकी वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका खेलप्रेमी, निर्माण व्यवसायी, व्यापारीहरु लगायतका सहयोगी निकायहरुबाट केही सहयोग रकम संकलन गरेका छौं ।
प्रतियोगिता सम्पन्नका लागि आवश्यक रकम सहयोगीदाताहरुलाई कुन कुन प्रशंसाको व्यवस्था आयोजकले गरेको छ ?
सहयोगिदाताहरुले सहयोग गरेवाफतको रकम अनुसार औपचारिक कार्यक्रममा प्रमाण पत्र वितरणमा सहभागि गराईने, प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान गरिने, कार्यक्रम अविधिभरमा सहयोगिदाताहरुको नाम बारम्बार उद्घोष गरिने, जिल्लाभरिका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमबाट सहयोगिदाताहरुको नाम प्रसारण गरिने, अन्य विविध सुविधाहरु आयोजक र प्रयोजक बीचमा भएको सहमति अनुसार हुने छन् ।
स्तरीय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्दै गर्दा अयोजकलाई कस्तो उप्रेरणा मिलेको छ ?
आयोजकलाई सोचेकोभन्दा पनि धेरै उत्प्रेरणा मिलेको छ । किनभने यस खेल सम्पन्नका लागि परिवर्तन गाउँपालिका लगायत सम्पूर्ण स्थानीयतह लगायतका सरोकारवाला निकायहरु प्रतियोगिताप्रति सकरात्मक हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि हामी आयोजकलाई थप उर्जा मिलेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्दै गर्दा कस्ता चुनौतीहरु आइपरेका छन् ?
चुनौतीहरु त धेरै नै छन् । किनभने कार्यक्रम स्थल यस जिल्लाको सदरमुकामभन्दा अलि ताढाको दुरीमा छ भने त्यसमाथि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भएकोले त झन थुप्रै बाधा चुनौतीहरु छन् नै । त्यस बाबजुट पनि पनि आयोजक प्रतियोगिता भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि दृद्धताका साथ लागि परेको छ ।
आयोजकले प्रतियोगिता र खेलाडीहरुको बसाई व्यवस्थापन कसरी मिलाएको छ ?
परिवर्तन गाउँपालिका र स्थानीय होटेल व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर आयोजकले प्रतियागिता र खेलाडीहरुको बसाई व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।
पछिल्लो समय खेलप्रति युवा खेलाडी र अभिभावकहरुको आकर्षण घट्दो अवस्था भएको अवस्थामा खेलाडीहरुको आकर्षणको अवस्था कस्तो छ ?
यो प्रतियोगितामा जोश जागर र उत्साहितका साथ खेलाडीहरु सहभागिता हुँदै छन् । खेल र खेलाडीहरु अन्य विधाका संघ संस्थाप्रति मेरो भन्नुपर्ने केही छैन तर मैले नेतृत्व गरेको संघका खेलाडीहरुले भविष्यमा बेइजजेत, बद्नामी, अपहेलित, अन्धकार बनाउने होइन कि इज्जत, मानसम्मान, खेलप्रति गर्व गर्न लयक भविष्य बनाउनु पर्दछ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुने अवस्था हुनेछ भन्ने मलाई विश्वष्ट छु ।
आयोजकको तर्फबाट जिल्लाका स्थानीयतह लगायतका सरोकारवाला निकायहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
यस प्रतियोगिता राष्ट्रिय स्तरकै प्रतियोगिता भएको कारण यस जिल्लाको गौरवको विषय हो । त्यसकारण सम्पूर्ण स्थानीयतह, सरोकारवाला निकायहरुलाई कार्यक्रम सम्पन्नका लागि आर्थिक, भौतिक र नैतिक रुपमा आफ्नो तह र तर्फबाट सक्दो सहयोगका लागि आयोजकको तर्फबाट म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
प्रतियोगिताको रिर्पाेटिङका लागि कार्यक्रम स्थलसम्म आयोजकले कस्तो व्यवस्था मिलाएको छ ?
यस प्रतियोगिताको रिर्पाेटिङका लागि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्य, स्थानीय पत्रकार र राष्ट्रिय स्तरका पत्रकारहरुसँग समन्वय भईरहेको छ ।
अन्तिममा महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेको छन्, कि ?
अन्तिममा प्रतियोगिताको तयारी लगायतका विषयवस्तुमा विचार राख्ने अवसर जुराइदिएकोमा यस पत्रिकाको सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक अभार व्यक्त गर्दुछ । यसै पत्रिका मार्फत प्रतियोगिता उद्घाटनको दिन सहभागिताका लागि समेत म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ आश्विन १६, शनिबार १३:०२ गते २०७८ आश्विन १६, शनिबार १३:०३ गते
एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन सुनछहरी गाउँपालिका कमिटीको प्रथम परिषद् सम्पन्न जुनिश कुमार विष्ट१६ असोज, पोबाङ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट शिक्षक संगठन...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ बैशाख २१, आईतवार १५:०५ गते २०७७ बैशाख २१, आईतवार १५:०६ गते
रोल्पा समाचारदाता रोल्पा, २१ बैशाख । श्रमका लागि बाहिर गई कोरोना भाइरसका कारण त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पामा फर्केर क्वाराइन्टाइनमा बसेका सुत्केरी, गर्भवती,...